Udale amathuba emisebenzi evula indawo yobumnandi emakhaya - Ilanga News
Home Izindaba Udale amathuba emisebenzi evula indawo yobumnandi emakhaya
Udale amathuba emisebenzi evula indawo yobumnandi emakhaya
Usomabhizinisi waseMsinga uthokozela ukuthi abantu kabasabuhluphekeli ubumnandi
KUBA nje eKoneni Lifestyle, abantu bezijabulisa ngokubhukuda njengoba ilanga lishisa ngendlela exakile eMsinga. UMNU Simanga Mabaso.
UVULELE amakhosikazi akhe amathathu indawo yobumnandi usomabhizinisi waseMsinga, owaziwa kakhulu ngomjaho wokupina izimoto iDrift Khana, ngenhloso yokubafundisa ukuzibambela amabhizinisi. UMnu Simanga Mabaso, ongusomabhizinisi owaziwayo eMsinga usanda kuvula indawo yobu mnandi, iKoneni Lifestyle & Shisanyama, ebithulwa ngokusemthethweni ngoZibandlela (December). Uthi le ndawo uyenzele amakhosikazi akhe okungu Nkk Nomfundo (uMaQikwe), uNkk Phumzile (uMaDumakude) noNkk Zama (uMaGcaba) Mabaso, ukuthi abe nayo into azophila ngayo noma kwenzeka ehamba emhlabeni ngelinye ilanga. Le ndawo yobumnandi yakhiwe endaweni yasemakhaya, lapho lo somabhizinisi ezalwa khona, inendawo yomtakabani ebizwa nge-VIP area, kube yindawo ewushisanyama, eyokucima ukoma, eyokuwasha izimoto, eyokucwala izinwele kanye nezindawo zokubhukuda izingane nabantu abadala.
Ekhuluma naleli phephandaba uthi, uMaQikwe, umabele indawo yokucwala izinwele neyokuwasha izimoto, kwathi uMaDumakude wamabela indawo yokushisa inyama, kwathi uMaGcaba wanikwa eyokucima ukoma eyokungena ezindaweni zokubhukuda, uyabele abafana bakhe abane. “Phambilini bengisebenza nabo kuwona wonke amabhizinisi ami, kodwa ngabona ukuthi lokhu kakubakhulisi njengoba umuntu uma esebenza into okungesiyo, eyakhe akaqikeleli. “Ngibone kungcono ngibenzele le ndawo yobumnandi bayiphathe ngokwabo, angithinti lutho oluhlangene nayo, ukuholela abasebenzi, kubheke bona, izindlela zokuyishintsha ibe ngengcono kulele kubona, nenzuzo abayenzile bazobona ukuthi benzani ngayo,” kusho uMnu Mabaso. Uthi wenze le ndawo yaba sendaweni yasemakhaya ngenhloso yokudala emisebenzi entsheni yendawo.
“Akekho ongazi ukuthi indawo yaseMsinga ihlaselwe ububha, intsha eningi ihleli emakhaya kayisebenzi. Kule ndawo enga-kaqedi ngisho unyaka sesinazo izisebenzi eziwu-30 futhi esibuye sizandisa uma kunemicimbi ekhona, okubalwa imicimbi yokubungaza usuku lokuzalwa nebaby shower ne bridal shower,” kuchaza uMnu Mabaso. Uthi ngaphambi kokuba kube khona le ndawo endaweni, abathandi bobumnandi bebehamba amabanga amade baye koDundee nakoGreytown ukuze bajabule. “Manje okungasenzeki ngoba ubumnandi sebula phambi kwabo ngisho kungahlwa kayikho ingcindezi yokusala kwizithuthi zomphakathi ngoba sekuseduze nasemakhaya. Ngisho abasebenza kude uma befike emakhaya kabayisweli indawo abazozijabulisa kuyona njengoba sekukhona iKoneni.
Abanye basuke eThekwini bebalekela isiphithiphithi bazozijabulela la emakhaya. “Okujabulisayo wukuthi womabili lamabhizinisi ami iKoneni neSiqalo B&B agcina esephakelana ngamakhasimende ngoba abasuka kude bagcine sebewelela eSiqalo beyofuna indawo yokulala ukuze ngakusasa baqhubeke nobumnandi,” kusho uMnu Mabaso. Uphethe ngokugqugquzela abafuna ukungena emabhizinisi ukuba bangazibalekeli izindawo zangasemakubo. Uthi lokhu kuthuthukisa umnotho wendawo futhi kusiza nomakhelwane abadonsa kanzima ngamathuba emisebenzi, bakwazi ukondla imindeni.
Previous articlePhendula ikamelo lokulala ihhotela
Next article‘MAKUVUSELELWE EZOKUVAKASHA NEZOLIMO UKUDALA IMISEBENZI’